Bandhigga 14aad ee Carrwada Bugaagta Hargeysa oo maanta la daah-furay iyo Arrimo Xiiso leh oo sannadkan ku cusub (SAWIRRO) | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Bandhigga 14aad ee Carrwada Bugaagta Hargeysa oo maanta la daah-furay iyo Arrimo Xiiso leh oo sannadkan ku cusub (SAWIRRO)
Hargeisa(SONNA)-Bandhigga Caalamiga ah ee Buugaagta (Hargeisa International Book Fair), ayaa maanta oo sabti ahayd si rasmi ah uga furmay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa, waxaanay socon doontaa muddo lix maalmood ah laga bilaabo 24-ka July ilaa 29 July 2021-ka.
Guddoomiyaha Xarunta dhaqanka Hargeysa, ahna Aasaasaha Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ka hadlay Bandhigga, ayaa waxa uu yidhi, “Waxaynu isugu nimi bandhigii 14aad ee Bandhiga caalamiga ah ee Buugaagta Hargeisa, Carwada Buugaagta sannadkasta waxa cusub ayaa jira, dalka inoo martida ahi waa Ethiopia, sannadkan 2021 halku dhigu waa ‘Deris Wanaaga. Sannadkii hore waxa joojiyay carwada COVID 19-ka.
“Annaga oo ku hadlayaa magaca Caasimada Hargeysa waxaan aqoonsanay muhiimada bandhiga Buugaagta caalamiga ahi uu u leeyahay dhalinyarada, waxaan u mahad naqayaa intiina ka soo qeybgashay, waxaanan idiin rajaynayaa nasiib wanaagsan, waxaanan rajeynayaa inaad wakhti koobaan u heshaan magaalada, waxna ka ogaataan sida loogu nool yahay,si weyn ayaan idiin soo dhaweynayaa,” sidaas ayuu yidhi Duqa degmada Hargeysa.
Biniyamu Shetu oo hoggaaminayay kooxda hiddaha iyo dhaqanka ee ka socotay dalka Ethiopa oo dareenkiisa cabirayey, ayaa waxa uu yidhi, “Annagu waxaanu ka nimi Itoobiya oo ka kooban qoomiyado badan, qoomiyad-kasta waxay xidhaan dharka dhaqanka oo u gaar ah. waa markii noogu horeysay ee aan ka soo qeybgalno bandhiga Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa maadama aanu African nahay isku dhaqan ayaanu nahay.”
Previous articleCiidamada Xoogga dalka oo soo bandhigay hub iyo meydka horjooge ka tirsan Al-Shabaab
Next articleDanjire Cawaale oo la kulmay shirkado ka howlgala wax soo saarka shiidaalka iyo tiknolojiyada